Woodbury County keessati namni corona virus qabame 2 seati 24 keessati duanii jiru, waliigalatti nam | KWIT
Woodbury County keessati namni corona virus qabame 2 seati 24 keessati duanii jiru, waliigalatti nam
By Fatiya Adam • Jan 13, 2021
Oromo News 01/13/2021
Woodbury County keessati namni corona virus qabame 2 seati 24 keessati duanii jiru, waliigalatti namni due 175 gaheera. Namni harownii qabame 46 jira.
Deparmantiin mana fayyaa Iowa seaati 24 keessati namni 10 sababa covid-19 du’uu gabaasan, waliigalatti namni due 4,200(4,232) ol tu due jira. akkasumas namni haarawa qabame 1,900 yoo tau, waliigalati namni qabame ammo 300,000 ol dha.
Counties dhan Iowa 50 ol qorannoo bultii 14 godhan keessati namni qabame parsantii 15% akka ta’an himame. Woodbury County ammo 15.4% dha.
Ogeesoni mana fayyaa Siouxland mask godhachuu, addeen fageenya eegachu, harka dhiqachuu, yoo dhukube mana taa’u, fi walitti dhufeenyi hin barbaachisne irraa uf eegu akka qaban ibse.
Iowa warri dhufan haarawa kan shuumaman hojattooni U.S House President Donald Trump motumaa irraa akka bu’uu hin hayyamnu jedhan. Isaan kunis Randy Feenstra kan Hull, Ashley Hinson kan Marion fi Mariannette Miller-Meeks kan Ottumwa turan.
Kun Kanaan osoo jiru, Lone Democratic Representative kan Washington, Cindy Axne akka isiin jetteti himannaa president irrati baname akka deegartu himte.
Barri 2020 magaala Sioux City dhaaf ifa haarawa fide. Oduu guyyaa har’aa irrati akka himameti, magaalan gabaasa waggaa tartee guddina baaye akka galmeesite himan. Manneen 521 ta’an ijaaramani jiru, kunis waggaa 15 darbe kana keessa ka irra guddaadha. kana bara 2019 mana 363 ijaarame ture.
Representatives Iowa kan U.S House keessa yeroo lammaafatif president Trump kan dalagaa irraa bu’uuti addaan qoodamanii jiru.
Hojattoni State haarawa kan filataman 4 Representative Randy Feenstra dabalatee filanoo mootumma haabu’un godhan irrati lakki hin tau jedhanii jiru.
Oduun kan isiinif dhufuu kunni karaa warra Seaboard Triumph Foods kan Sioux City Iowa kessarrayii, hallaa gariidhan warra hawaasaa Siouxland baraa 2017 irra qarqaruu. Edeefannoo dabalataa yoo fetaan wa’ee Seaboard Triumph Foods maloo websayitii Sioux City Pork dot com sennaa lalaa.
State lawmakers guyyaa har’aa gara Capital Iowa deebiani jiran. Barumsi, taxation, eegumsi filannoo
By Fatiya Adam • Jan 12, 2021
Oromo News 01/11/2021
State lawmakers guyyaa har’aa gara Capital Iowa deebiani jiran. Barumsi, taxation, eegumsi filannoo gubbaa irraa jiru kan bara 2021 Iowa legislature dhaafi namni 200 ol kan maaski hin godhanne argamanii turan.
Namootni dhibaatama keessa namni muraasa haguugi fuula osoo hin godhatin Capital Iowa har’a guutani jiru. Haguugi fuula kan morman yoo kan mormaniidha fi ogeeyyin fayyaa dhukubi akka hin baayane kan qarqaaru akka tae himanii turan.
By Fatiya Adam • Jan 11, 2021